Ny herin'ny marketing Infographic ... Miaraka amin'ny fampitandremana | Martech Zone
Ny herin'ny marketing Infographic… Miaraka amin'ny fampitandremana
Alahady Oktobra 5, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity famoahana ity sy ny ankamaroan'ny asa ataonay ho an'ny mpanjifa dia misy atiny hita maso. Mety… ny mpihaino anay nitombo be miaraka amin'ny fifantohana amin'ny atiny hita maso ary izahay koa dia nanampy ny mpanjifanay hampitombo ny fahafahan'izy ireo amin'ny atiny hita maso ao anatin'ny fifangaroana.
Ity amin'ny an infographic izay Media Domination Media noforonina mba hampisehoana ny herin'ny atiny hita maso. Tsy tsiambaratelo ny famalian'ny mpanjifa tsara kokoa ny varotra maso, ary izany no antony iray mahatonga ny infografika lasa endrika malaza sy mahomby amin'ny varotra an-tserasera. Mamela anao hanolotra fampahalalana amin'ny fomba izay handraisan'ny mpihaino anao ny hafatrao izy ireo, fa tsy hivezivezy amin'ny alàlan'ny andian-tsoratra ary hitazona ampahany kely amin'ny fampahalalana.
Fampitandremana amin'ny atiny hita maso
Zava-dehibe amin'ny iray ny votoatin'ny sary toa ny infografika paikady atiny mahomby fa raha tsy aseho amin'ny sehatra voatsinjara izay manampy amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisana lalina sy ny fahafaha-miaina. Inona no tiako holazaina?
Ampy ve ny lahatsoratra mifandraika amin'izay hanampianao ny votoatinao hita maso laharana amin'ny motera fikarohana? Ho tsikaritrareo fa nofonosinay foana amin'ny Internet ny infografika. Izany dia mba tsy hitan'ny motera fikarohana fa maivana amin'ny atiny ary tsy raharahiany amin'ny laharana. Raha matetika dia misy atiny an-taonina maro ny infografika, Google kosa tsy manisy index ny atiny ao anaty infografika, fa mijery ny atiny manodidina azy izy ireo. Matt Cutts aza dia nampitandrina roa taona lasa izay izay rohy sy lazan'ny ny infografika dia azon'ireo motera fikarohana (IMO, mety ho adala izany ary mino aho fa tsy hisy izany).
Moa ve misy miantso amin'ny asa amin'ny infographic? Tsy ampy ny mamaky infographic fotsiny ary mahita ny logo iray hoe iza no nanao azy, inona ny paikady tokony hitondranao ny mpamaky amin'ny dingana manaraka amin'ny fizotran'ny fividianana? Matetika izahay mamoaka infografika hampiroborobo ny atiny lalindalina kokoa toy ny whitepapers na mba hamporisihana karazana fisoratana anarana hiverina amin'ny tranokalan'ny mpanjifa.
Moa ve misy pejy fipetrahana miaraka amin'ny tolotra ny CTA no hitarika ny fifamoivoizana? Misy endrika fisoratana anarana ve hanoratana ny mpamaky amin'ny mailaka na newsletter? Misy lahatsoratra na infografika hafa mifandraika ve zaraina amin'ny pejy fiantsonana hahafahanao mitondra ny mpamaky lalindalina kokoa?
Manao ahoana ianao mandrefy ny fiantraikany ny atiny maso zaraina? Tsy manelingelina ny adikao ary apetaho ity lahatsoratra ity boaty eo ambanin'ilay infographic izay manery ny hanery ny backlink. Miaraka amin'ny CTA anay amin'ny infographic, matetika izahay dia mampiasa mpifaninana rohy toy ny Bit.ly izay manampy antsika handrefy ny hetsika mivantana ateraky ny infographic.
Ahoana ary oviana ianao fampiroboroboana ny infographic? Izahay dia mizara ny infografika ho an'ny mpanjifanay amin'ny endrika PDF an-tsary izay mahasoa ho an'ny Slouriare sy mampiroborobo ny infographic izahay mandritra ny fantsona sosialy an'ny mpanjifa rehetra, ny fantsona sosialy misy anay ary matetika ny orinasam-pifandraisan'ny mpanjifa dia mametraka ny sary amin'ny tranonkala mifandraika amin'izany. Tsy ampy ny famoronana sary, mila manana paikady fampiroboroboana ianao. Ary hampiroborobo antsika hatrany… tsy fampielezan-kevitra tokana.
Ity infographic ity dia manazava ny antony mahomby, mahasarika ary maharesy lahatra ny atin'ny sary. Miresaka ny fahombiazan'ny paikady infographic sy ny antony tokony handinihan'ny orinasanao ny marketing infographic. Tetikasa mahatalanjona hisarihana ny marketing infografika, saingy mila manana paikady mifandraika amin'izany ianao mitandrina sy miova fo ny fifamoivoizana mahasarika anao!
Tags: DK New Mediavarotra infographicfampiroboroboana infographicpaikady infographicsary fampahalalanahaino aman-jery fanjakazakan'ny tsenaMarketing Infographicsvotoaty hita maso